Vaovao - Tena tsy mila menaka fanosorana ve ny filan'ny Oilless?
Tena tsy mila menaka fanosorana ve ny bearings Oilless?
Ny bearings tsy misy solika dia karazana bearings lubricated vaovao, miaraka amin'ny toetran'ny bearings vy sy bearings tsy misy menaka. Izy io dia feno metaly metaly ary nohosorana diloilo fanosotra manokana.
Izy io dia manana ny mampiavaka ny fahaizany mitondra avo, ny fanoherana ny fiatraikany, ny fanoherana ny hafanana avo ary ny fahaiza-manosotra tena. Izy io dia mety indrindra amin'ny fotoana izay sarotra ny manosotra sy mamorona sarimihetsika solika, toy ny enta-mavesatra, haingam-pandeha, mamaly na mihetsiketsika, ary tsy matahotra ny hitrandrahana rano sy ny harafesin'ny asidra hafa.
Ampiasaina be amin'ny milina fanariana metallurgical mitohy, fitaovana mihodina vy, milina fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, sambo, turbinina etona, turbinina hydraulic, milina fanamboarana tsindrona ary tsipika famokarana fitaovana.
Ny fitaterana tsy misy solika dia midika fa ny fiakarana dia afaka miasa ara-dalàna raha tsy misy solika na menaka kely kokoa, fa tsy tsy misy menaka tanteraka.
Tombony amin'ny bearings tsy misy menaka
Mba hampihenana ny fikorontanana anaty sy ny fitafian'ny ankamaroan'ny bearings ary hisorohana ny fandoroana sy ny fametahana, ny menaka manosotra dia tsy maintsy ampidirina mba hiantohana ny fandefasana malefaka sy azo itokisana ny bearings hanitatra ny ain'ny havizanan'ny bearings;
Esory ny fahalotoan'ny tontolo iainana ateraky ny famoahana;
Mety amin'ny enta-mavesatra, haingam-pandeha, miverina na mihetsiketsika indraindray izay sarotra ny manosotra sy mamorona sarimihetsika solika;
Tsy matahotra ny hitrandrahana rano sy ny harafesin'ny asidra hafa koa izy io;
Ny bearings inlaid dia tsy mitsitsy solika sy angovo fotsiny, fa manana fiainana serivisy lava kokoa noho ny fitondra mihetsiketsika mahazatra.
Tandremo ny fametrahana lasantsy tsy misy menaka
Ny fametrahana fitondra tsy misy solika dia mitovy amin'ny tadin-dokanga hafa, misy ny antsipiriany mila marihina:
(1) Fantaro raha misy mibontsina, protrusions, sns. Eo ambonin'ny fanambadiana ao amin'ilay hazo sy ny akorany.
(2) Na misy vovoka na fasika eny ambonin'ny onjan-trano fitondra.
(3) Na dia misy gorodona kely aza, protrusions, sns, dia tokony esorina amin'ny vato misy menaka na taratasy fotsy izy ireo.
(4) Mba hisorohana ny fifandonana mandritra ny famoahana dia misy menaka manosotra kely ampiana eo ambonin'ny vatan-kazo sy ny zoro.
(5) Ny hamafin'ny fitaterana tsy misy menaka noho ny hafanana be loatra dia tsy tokony hihoatra ny 100 degre.
(6) Tsy azo terena ny fitazonana sy ny takelaka famehezana tsy misy menaka.